musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hawaii Kupwanya Nhau » Vashanyi veUS: Hawaii Yakanakisa, COVID kana kuti hapana COVID!
Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hawaii Kupwanya Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • vanhu • Kuvakazve • Resorts • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
81% yevanosvika vekuUS vanotora rwendo rweHawaii seYakanakisa muCOVID-19 Mushanyi Wekugutsikana poll.
Mukati memwedzi waGumiguru 2021, chirongwa cheHawaii cheSafe Travels chakabvumira vafambi vazhinji vaisvika kubva kunze kwenyika kuti vapfuure nekuzvivharira kwemazuva gumi kana vakabaiwa zvizere muUS kana vaine mhedzisiro yeCCIDID-10 NAAT bvunzo kubva kune Akavimbika. Testing Partner.
Vashanyi vakadzokorora vaigona kuve vakabaiwa zvizere uye mukana wekubaiwa zvizere wakawedzera nezera.
Vafambi vechiduku, vanorondedzerwa sevaya vari pasi pemakore 35, ndivo vainyanya kunzwa kuti rwendo rwavo rwaipfuura zvavaitarisira.
Pavakabvunzwa nezve ruzivo rwavo, vangangoita vese (98%) vakapindura vakaratidza hushamwari hwevashandi veHawaii nevagari se "Zvakanaka" kana "Kupfuura Avhareji."
The Hawaii Tourism Authority (HTA) yakaburitsa mibairo yetsvakiridzo yazvino yekutsvagisa, iyo yakaongorora vashanyi kubva kuContinental US vakashanyira Hawaii kubva Gumiguru 1 kusvika Gumiguru 5, 2021, kuti vaone ruzivo rwavo neHawaii's Safe Travels chirongwa uye kugutsikana kwerwendo rwese. Iyi iongororo yechina uye yekupedzisira yevashanyi muhurongwa hwakatanga mukupera kwegore rapfuura.
Vazhinji vashanyi (81%) vakaronga yavo Hawaii rwendo se "Zvakanaka;" kugutsikana kwevashanyi kwakaramba kwakadzikama mukati megore nekunyura kushoma muongororo yakaitwa muna Chikumi 2021. Apo vakabvunzwa vakatara rwendo rwavo se "Above Average" kana kuti pasi vakabvunzwa chaizoda kuchinja nezverwendo rwavo kuti vatarise rwendo rwavo se "Zvakanaka," vashanyi vakataura zvishoma zvirambidzo zveCOVID (32%) zvichiteverwa nekuteedzera mitemo yeCOVID (12%).
Pavaenzi vaidzokorora vainge vamboendawo Hawaii muna Kukadzi 2020 kana kutanga, izvo zvaive zvisati zvaitwa nehurumende zvirambidzo zveCCIDID, makumi matatu nemasere muzana vakaratidza kuti rwendo rwavo rwanga rwusingagutsi. Chikonzero chikuru chakataurwa cheizvi chaive chakawandisa kurambidzwa kweCCIDID (38%) uye kuwanikwa kushoma kana huwandu hweresitorendi, zvinokwezva uye pekugara. Zvisinei, 65 muzana yevashanyi vakati vakakwanisa kuita zvose kana kuti zvizhinjisa zvemibato yavakanga varonga.
Ongororo iyi yakaratidzawo kuti vafambi vechidiki, vanonzi vari pasi pemakore 35, ndivo vangangonzwa kuti rwendo rwavo rwaipfuura zvavaitarisira.
Pavakabvunzwa nezve ruzivo rwavo, vangangoita vese (98%) vakapindura vakaratidza hushamwari hwevashandi nevagari se "Zvakanaka" kana "Pamusoro Avhareji." Vazhinji vashanyi vakateya hotera yavo (kana nzvimbo yekugara) seyakanakisa (82%).
Muna Gumiguru 2021, HawaiiChirongwa cheSafe Travels chakabvumira vafambi vazhinji vanosvika kubva kunze-kwenyika kuti vapfuure nemazuva gumi ekuzvivharira wega kana vakabaiwa zvizere muUS kana vaine mhedzisiro yeCCIDID-10 yeNAAT yebvunzo kubva kuTrusted Testing Partner. Ruzhinji rwevashanyi (19%) vakati vanga vasina nyaya neSafe Travels webhusaiti kana maitiro.
Vasati vasvika muHawaii, vangangoita vashanyi vese (98%) vaiziva kuti zvisungo zvehurumende zvaivepo, sekupfeka mask mune dzimwe nguva, kushamwaridzana, uye kudzivirira kuungana mumapoka makuru.
Ruzhinji (70%) rwevakapindura vakati vachashanyira Hawaii zvakare zvisinei nezvinodiwa vasati vashanya. Pavasara makumi matatu muzana vevakapindura, gumi nemasere vakati vachashanya zvakare kana denda rapera uye mazhinji kana ese ezvemitemo yeCOVID senge bhizinesi kana zvirambidzo zvekukwezva zvabviswa, 30 muzana vakati havana hurongwa hwekudzokera kuHawaii, uye. 18 muzana vakati vachashanya zvakare kana pasina pre-shanya COVID yekuongorora zvinodiwa.